Mobile Casino Free daashi | amụma nzuzo |
Home » Ekwentị Casino daashi » Mobile Casino Free daashi | amụma nzuzo
Lee anyị Mobile ruleti, Slots and Other Casino No Deposit Required Offer Here!
Ekwentị Casino na Online daashi Home
a amụma nzuzo na-achịkwa n'ụzọ nke MobileCasinoFreeBonus.com nakọtara, ojiji, -ekwusi wee kwupụta ozi anakọtara site na ọrụ (onye ọ bụla, a “User”) nke http://www.mobilecasinofreebonus.com website (“Site”). Nke a na iwu nzuzo ahụ ka Site na niile ngwaahịa na ọrụ awa site Mobile Casino Free daashi .com.
Anyị nwere ike ịnakọta onye njirimara ọmụma si Users na a dịgasị iche iche na njikọ na-eme, ọrụ, atụmatụ ma ọ bụ ihe onwunwe anyị na-eme dị na anyị na saịtị. Ọrụ ike-jụrụ n'ihi, dị ka ihe kwesịrị ekwesị, aha, nọmba ekwentị. ọrụ ike, Otú ọ dị, gaa na anyị na saịtị anonymously. Anyị ga-anakọta onye njirimara ọmụma si Ọrụ ọ bụrụ na ha n'afọ ofufo n'okpuru ndị dị otú ahụ ozi anyị. Ọrụ nwere ike mgbe niile-ajụ-ezitekwara onwe njirimara ọmụma, ma e wezụga na o nwere ike ime ka ha ghara ekere òkè na ụfọdụ saịtị metụtara omume.
Anyị nwere ike ịnakọta na-abụghị onye njirimara ọmụma banyere Users mgbe ọ bụla ha mmekọrịta na anyị na saịtị. Non-Personal Identification ọmụma pụrụ ịgụnye ihe nchọgharị aha, ụdị kọmputa na oru ihe ọmụma banyere Users pụtara nke njikọ ahụ a anyị Site, dị ka sistemụ arụmọrụ na Internet na enye ọrụ tinye n'ọrụ na ndị ọzọ yiri ọmụma.
Anyị Site nwere ike iji “kuki” welie o ahụmahụ. Onye ọrụ nchọgharị na weebụ nsị kuki na ha siri ike mbanye n'ihi ndekọ-edebe nzube na mgbe ụfọdụ soro ọmụma banyere ha. Onye ọrụ nwere ike ịhọrọ ka ha nchọgharị weebụ na-ajụ kuki, ma ọ bụ ịgwa ndị ị na mgbe kuki a na-zitere. Ọ bụrụ na ha na-eme otú, mara na akụkụ ụfọdụ nke saịtị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma.
MobileCasinoFreeBonus.com nwere ike anakọta ma jiri Users ozi nkeonwe maka ndị na-esonụ na nzube:
– Ka iwelie mma ahịa ọrụ
Ozi ị na-enye na-enyere anyị azaghachi gị ahịa ọrụ na arịrịọ na nkwado mkpa ọzọ rụọ ọrụ nke ọma.
– Iji hazie ọrụ ahụmahụ
Anyị nwere ike iji ozi ke rụpụta mkpokọta nchịkọta ịghọta otú anyị Users dị ka otu ìgwè na-eji ọrụ ya na ego nyere na anyị na saịtị.
– Ka iwelie mma anyị Site
Anyị nwere ike iji nzaghachi ị na-enye iji melite ngwaahịa na ọrụ anyị.
– Hazie ịkwụ ụgwọ
Anyị nwere ike iji ozi Ọrụ na-enye banyere onwe ha mgbe Ịtụkwasị ịtụ naanị inye ozi na iji. Anyị na-adịghị ekere òkè a ọmụma na-abụghị ndị ọzọ ma e wezụga ruo n'ókè dị mkpa iji nye ọrụ.
– Na-agba ọsọ a nkwalite, zoo, nnyocha e mere ma ọ bụ ndị ọzọ na saịtị feature
Anyị na-enwe ihe kwesịrị ekwesị data collection, nchekwa na nhazi omume na nchebe na-echebe megide n'enweghị ikike ohere, mgbanwe, ngosi ma ọ bụ mbibi nke ozi nkeonwe gị, aha njirimara, password, azụmahịa ọmụma na data echekwara anyị Site.
Anyị na saịtị bụ na nnabata na PCI vulnerability ụkpụrụ iji ike dị ka ala nke gburugburu ebe dị ka o kwere maka Ọrụ.
Anyị na-adịghị ere, ahia, ma ọ bụ mgbazinye Users onye njirimara ọmụma ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịkekọrịta ọnyà aggregated ozi igwe mmadụ adịghị jikọrọ ihe ọ bụla na njirimara ọmụma banyere ọbịa na ọrụ anyị azụmahịa mmekọ, tụkwasịrị obi mmekọ na-akpọsa ngwá ahịa n'ihi na èchìchè kwuru okwu ha n'elu.
Ọrụ ike-achọpụta na mgbasa ozi ma ọ bụ ndị ọzọ ọdịnaya na anyị na saịtị na-ejikọta ndị saịtị na ọrụ anyị mmekọ, suppliers, akpọsa ngwá ahịa, haziri nzukọ, ikikere na ndị ọzọ na otu nke atọ. Anyị adịghị achịkwa ihe ọdịnaya ma ọ bụ njikọ na-egosi na saịtị ndị a na ọ bụghị maka ihe omume n'ọrụ site weebụsaịtị jikọrọ ma ọ bụ anyị na saịtị. Na mgbakwunye, saịtị ndị a ma ọ bụ ọrụ, gụnyere ha ọdịnaya na njikọ, nwere ike ịbụ na agbanwe agbanwe. Saịtị na ọrụ ndị nwere ike nwere onwe ha nzuzo atumatu na ahịa ọrụ atumatu. Nchọgharị na na mmekọrịta on ọ bụla ọzọ website, gụnyere weebụsaịtị nke nwere njikọ anyị na saịtị, bụ isiokwu na website onwe usoro na atumatu.
Mgbasa ozi igosi na anyị na saịtị nwere ike inye ya Users site mmekọ mgbasa ozi, onye ahụ nwere ike ịtọ kuki. Kuki ndị a ka ndị ad nkesa chọpụta kọmputa gị oge ọ bụla ha ezitere gị otu online advertisement ikpokọta-abụghị onye njirimara ọmụma banyere gị ma ọ bụ ndị ọzọ ndị na-eji kọmputa gị. Ozi a na-enye ohere netwọk mgbasa, ihe ndị ọzọ, anapụta mgbasa ozi ezubere iche ha kweere ga-nke kasị adọrọ mmasị gị. Nke a na iwu nzuzo anaghị ekpuchi ndị ojiji nke kuki site ọ bụla akpọsa ngwá ahịa.
Nlere ụmụ online nzuzo Nchedo Act
Ikpuchido nzuzo nke dị obere dị mkpa karịsịa. N'ihi na ihe mere, ọ dịghị mgbe anyị na-anakọta ma ọ bụ ịnọgide na-enwe ọmụma na anyị na saịtị ndị na anyị maara n'ezie na-n'okpuru 18, na-abụghị akụkụ nke anyị website na-ahaziri iji na-adọta onye ọ bụla n'okpuru 18.
MobileCasinoFreeBonus.com nwere ezi uche imelite a na iwu nzuzo mgbe ọ bụla. Mgbe anyị na-eme, anyị ga-agụgharị emelitere ụbọchị na ala nke a na peeji nke. Anyị na-agba ndị ọrụ na-ugboro ugboro-elele ibe a n'ihi na ọ bụla mgbanwe aka ịma otú anyị na-enyere iji chebe onwe onye ozi anyị nakọtara. Ị na-ekweta na-ekweta na ọ bụ gị na ọrụ nyochaa a na iwu nzuzo oge na ibu maara nke mgbanwe.
Site na iji saịtị, ị mata gị nabata nke a iwu. Ọ bụrụ na ị na-ekweta na a iwu, biko ejikwala anyị Site. Gị wee na ojiji nke saịtị na-eso ikenye nke mgbanwe a iwu ga-e weere gị nabata ndị mgbanwe.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla banyere nke a Amụma nzuzo, omume niile nke saịtị a, ma ọ bụ n'otú i si emeso saịtị a, biko kpọtụrụ anyị na:
Nke a akwụkwọ e emelitere ikpeazụ on March 24, 2014
March 24, 2014 by Mobile Casino Free daashi: posted in Ekwentị Casino daashi • No Comments